ụlọ ọrụ ụgbọala na-emeghe oghere China Manufacturer
Nkọwa:Hite Smart Garage Ụlọ,Ụlọ na-echekwa ụlọ ahịa na-akwụ ụgwọ,Ọnụ ụzọ na-emepe ọnụ ụzọ ámá nke obodo
Home > Ngwaahịa > Na-aga n&#39;ihu n&#39;Ọnụ Ụzọ > Ogige ụlọ ọrụ na-echekwa ebe obibi > ụlọ ọrụ ụgbọala na-emeghe oghere
ụlọ ọrụ ụgbọala na-emeghe oghere
Ihe Nlereanya.: HF-J742
Ọnụ ụzọ nke ụlọ na-ebuli elu bụ nke e ji ọla kọpa rụọ dị ka efere ọla na efere aluminụ, ụfọdụ n'ime ha bụ sandwiched na ihe ndị na-adọrọ adọrọ polyurethane ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, nke a na-ejikarị eme ihe maka ụlọ nkwakọba ihe. A na-eji igwe igwe ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ mmepụta ego na ntaneti na-emepụta ihe na ụlọ akwụkwọ na ụlọ nkwakọba ihe nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ọ bụ kọmpat, nchekwa, ma dị mfe iji. Biko gụọ akwụkwọ ntuziaka a nke ọma tupu eji ya ma soro ntuziaka maka nhazi na ọrụ.
Atụmatụ ọrụ kachasị na igwe igwe elu :
1) Njikwa ihe ntanetị: Na-agbanye koodu mgbagharị koodu, enweghị koodu ọghachị, na nchedo dị mma.
2) bọtịnụ ịkwụsị mberede : Akwụnye bọtịnụ mkpọchi mberede na igbe nchịkwa. N'ọnọdụ mberede, enwere ike iwepụ ike nke circuit ahụchi iji chebe mmadụ na igwe.
3) Usoro nkwụsịtụ aka: A na-akwadebe moto ahụ na sistemụ breeki aka, nke nwere ike ịme ngwa ngwa ngwa na nkwụsị nke ọma.
4) Ntọhapụ ngwa ngwa : Site n'ịkwụsị ngwa ngwa, ọ nwere ike ikewapụ ụzọ dị iche iche site na igwe maka nhazi na nlekota dị mfe.
5) Ntuziaka ntuziaka: N'ọnọdụ nke ike ike, wdg, a ga-emeghe ọnụ ụzọ mechie.
6) Ngwongwo mgbochi mpempe: Ọ na - ewepụta ịgba chaa chaa abụọ, nke dị nchebe na ndị a pụrụ ịdabere na ya.
Bulie oghere ụzọ na ngwa:
Mmezu: Awara ụzọ, ma ọ bụ ọnụ ụzọ nwere ọnụ ụzọ dị nta na ọtụtụ windo dị iche iche, a na-enye onye na-eme ihe ike n'ime ọnụ ụzọ, nke nwere ike iwusi ike nke ahụ ụzọ ahụ, mee ka ikuku na-agbadosi ike, ma ọ bụ igbochi ọnụ ụzọ ahụ na-emeghe.
Deformation of the door due to the weight of the door door.
Akara: Iji chekwaa okpomọkụ na nchebe gburugburu ebe obibi, ọdịiche dị n'agbata mgbidi ahụ, ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ ọhụụ kwesịrị ịchekwa. N'elu, n'akụkụ na ala nke ụlọ elu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ihe nb͕ochi dị iche.
Ihe nkedo nke ebe ngbaba ụgbọala anyi:
Ime ihe dị mfe: njikwa ntanetị, nchịkwa dị ukwuu dịpụrụ adịpụ, dị irè n'ime mita 30
Udo dị ala ma dị ala: mgbe ọnụ ụzọ na-agba ọsọ, ụda olu dara ụda 60 db, ihe kachasị mma na ngwaahịa kama ịnweta ọnụ ụzọ, hụ na ebe obibi nke oge a dị jụụ ma dị mma.
Mara mma ma sie ike: ogwe aka abụọ n'ime na n'èzí ọnụ ụzọ, polyurethane mkpuchi, panel ọkpụkpụ 35 mm-40 mm, siri ike na mkpuchi
Nchekwa: n'oge mmechi ụzọ, malite nrụrụ na-eme ka ọ bụrụ otu ụzọ na-ezukọta, chebe ndị mmadụ na ụgbọala site na-emejọ, enwekwara ihe mmetụta sensọ (nhọrọ)
Nkwenye siri ike: arụ ọrụ mkpuchi ịgha agha, mgbe onye na-agbaji ụzọ, tweeter ga-emeghe (nhọrọ)
Usoro nchịkwa ntanetịime: onye na-enweta ma ọ bụ nata ozi ọma superheterodyne, nkwụsi elu, koodu ntụgharị, nkwenye siri ike.
Ụzọ dị iche iche ụzọ ụzọ meghere: ụzọ ntanetị, eletriki, ụzọ nchịkwa akwụkwọ, na ọnụ ụzọ na-akwadebekwa mkpọchi ike mberede.
Ọnụ ụzọ na-ekpuchi ebe ọ bụla: mgbe ike na mberede na-akụda ma ọ bụrụ na a kwadebere ya na ike ndabere adịghị emechi kpamkpam, nanị weghachie mkpigide ọzọ, a ga-akpọchi ụzọ ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko jiri obiọma kpọtụrụ m. Daalụ.
Kedu ihe ị ga-esi n'aka anyị?
Ngalaba na-emepụta tupu oge eruo mbupu.
Akpanaka Aluminom Alloy Residential Sectional Garage Door Kpọtụrụ ugbu a
Oghere Ụlọ Ọrụ Aluminum Alloy Residential Sectional Garage Door Kpọtụrụ ugbu a
Hite Smart Garage Ụlọ Ụlọ na-echekwa ụlọ ahịa na-akwụ ụgwọ Ọnụ ụzọ na-emepe ọnụ ụzọ ámá nke obodo 2019 Hot-ere Garage Ụlọ Ogige Garage Ụlọ Elu Ụlọ Garage Ụlọ Akpaaka Garage Ọsọ Ụlọ Ụlọ Garage Ụlọ